पशुपतिनाथ मन्दिरकाे तस्विर खिच्नेलाई कारबाही गर्छाैं : सचिव डा. ढकाल
काठमाडौं । हिन्दुधर्मावलम्बीहरुको आराध्यदेव पशुपतिनाथलाई विवादमा ल्याउने कार्य निरन्तर रुपमा हुन थालेको छ । एक दशकअघि भेटीको विषयबाट खुलेआम रुपमा पशुपतिनाथलाई विवादमा ल्याउने कार्यलाई आजपर्यन्त कुनै न कुनै विषयबाट निन्तरता दिने काम भइरहेको छ । कहिले राजनीतिक आवरण त कहिले धार्मिक भेषमा पशुपतिनाथलाई विवादमा ल्याउने कार्यले निरन्तरता पाइरहेको हो । अहिले पशुपतिनाथलाई दुईवटा विषयले विवादमा ल्याइएको छ, एउटा पशुपतिनाथको गर्भगृहस्थित मुख्य शिवलिङ्ग (ज्योर्तिलिङ्ग)को तस्विर र अर्काे पाशुपत क्षेत्रमा जगन्नाथको प्रतिमा प्रतिष्ठा गर्ने विषय । पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र मोबाइल लैजान पाइँदैन । तर, मुख्य शिवलिङ्ग अर्थात ज्योर्तिलिङ्गको तस्विर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि पशुपतिनाथको गरिमा र मर्यादालाई आँच आउने कार्य भएको भन्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आलोचना भइरहेको छ । उक्त तस्विरबारे अनुसन्धान भइरहेको कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले क्यानाडानेपाललाई जानकारी दिए । तस्विर सार्वजनिक हुनुमा कोषकै सदस्य अर्जुन बास्तोलालाई मुछेर समाचार आइरहेका बेला सदस्य सचिव डा. ढकालले उक्त तस्विर जोसुकैले खिचेर र सार्वजनिक गरेको भए पनि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘तस्विर सार्वजनिक भएको विषयमा मैले सदस्य बास्तोलालाई सोधेको थिएँ, उहाँले मैले त्यसो गरेको छैन भन्नु भएको छ’, सदस्य सचिव डा ढकालले भने, ‘प्रविधिको विकाससँग विकसित हिडन क्यामेरा प्रयोग गरेर कसैले खिचेको हुन सक्छ । यसबारे हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं, दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्छाैं ।’ पशुपतिनाथ परिसरमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर दर्शनार्थीले पनि तस्विर लिएको हुन सक्ने बताएका उनले अबदेखि पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र क्यामेरा, मोबाइल लैजान प्रतिबन्ध लगाउने जानकारी दिए । पशुपतिनाथको गरिमा, पवित्रता र आस्थालाई आँच आउने कार्य रोक्न सबैले कोषलाई साथ दिनुपर्ने बताएका सदस्य सचिव ढकालले पशुपतिनाथको गरिमा र पवित्रतामाथि आँच आउन नदिन विकसित प्रविधिका विषयमा छलफल गरि सोही किसिमको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिए । विभिन्न विषय र प्रसङ्ग जोडेर पशुपतिनाथलाई विवादमा ल्याउने कार्य कोषलाई अस्वीकार्य रहेको भन्दै उनले पशुपतिनाथमाथिको राजनीति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
जगन्नाथको प्रतिमा प्रतिष्ठा गर्ने हल्लामात्रै
पशुपति क्षेत्रमा भारतको गोवर्द्धनमठबाट ल्याइएका जगन्नाथको प्रतिमा प्रतिष्ठा गर्ने हल्ला निराधार रहेको कोषका सदस्य सचिव डा. प्रदीप ढकालले क्यानाडानेपाललाई जानकारी दिए । भारतमा रहेको गोवर्द्धनमठ पुरीपीठको आधिकारिक व्यक्ति तथा गोवर्द्धनमठका पीठाधीश श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्यको प्रतिनिधि बताउने डा. सिद्धार्थ साहूले जगन्नाथको प्रतिमा पशुपतिमा प्रतिष्ठा गर्ने प्रयास गरेको भन्दै विश्व हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले आपत्ति जनाएको थियो । विश्वभर रहेका हिन्दुधर्मावलम्बीहरुबीचको सहिष्णुता खलबल्याउने नियतका साथ नेपालको धर्म संस्कृतिमा प्रहार गर्ने क्रममा पशुपति क्षेत्रमा जगन्नाथको प्रतिमा प्रतिष्ठा गर्ने प्रयास भएको भन्दै महासंघकी महासचिव अस्मिता भण्डारीले आपत्ति जनाएकी थिइन् । र यसको आधिकारिताबारे जानकारी लिन उनले भारतको ओडिशास्थित पूरीपीठसँग जवाफ मागेकी थिइन् । पुरीपीठका पीठाधिश गुरु शंकराचार्यले पशुपति क्षेत्रमा जगन्नाथको प्रतिमा प्रतिष्ठा गर्ने कल्पनासमेत नगरेको भन्दै जवाफ दिएका छन् । पुरीपीठका शंकराचार्यले महासचिव अस्मिता भण्डारीलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा जगन्नाथको प्रतिमा प्रतिष्ठा गर्नेबारे आफ्नो पीठले नसोचेको र यसमा आफूहरुको कुनै पनि तहमा आधिकारिक संलग्नता नरहेको स्पष्ट पारेको छ । पुरीपीठको धारणासँग कोषको धारणा पनि मिल्न गएको छ । कोषका सदस्य सचिव डा. ढकालले पशुपतिनाथ परिसरमा जगन्नाथको प्रतिमा प्रतिष्ठा गर्ने हल्ला निराधार रहेको भन्दै यस विषयमा छलफल नै नभएको बताए । जगन्नाथको प्रतिमा प्रतिष्ठा गर्ने विषयमा डा. सिद्धार्थ साहूले भेटेको भन्ने विषयमा उनले आफूसँग डा. साहूले भेट गरेको भए पनि जगन्नाथको प्रतिमा प्रतिष्ठापन गर्ने विषयमा कुराकानी नै नभएको जानकारी दिए । पुरातत्व विभागको स्वीकृति र कोषको गुरुयोजनाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कार्य नहुने भन्दै उनले यस्ता निराधार हल्लाले पशुपतिनाथलाई विवादमा ल्याउने कार्य भएको बताए । पशुपतिनाथलाई विवादमा ल्याउने कार्य दुःखलाग्दो भएको उनको भनाइ छ । पशुपतिनाथको गरिमा र पवित्रतामा आँच आउन नदिन कोष सक्षम रहेको भन्दै उनले कसैले अफवाह फैलाउँदैमा पशुपतिनाथ र यसप्रति आस्था राख्ने कसैको मनमा चोट नपुर्‍याउने दाबी गरे । व्यक्तिको इच्छा भन्दा पनि संस्थाको गुरुयोजना र नियमले प्राथमिकता पाउने जानकारी दिँदै सदस्य सचिव डा. ढकालले निराधार हल्लाको पछि लाग्न सबैमा आग्रहसमेत गरे । canadanepal याे पनि पढ्नुहाेस्--------
काठमाडौंकाे पशुपति मन्दिरमा यसरी हुन्छ यौन धन्दा
काठमाडौं : कलकत्ताकी सीताकुमारी दास (१८)ले पशुपति मन्दिरबारे थोरै मात्र सुनेकी थिइन्। जब उनका प्रेमी राजु सिंहले यहाँको बारेमा उनलाई बताए, सीतालाई पशुपति कहिले जाउँ जस्तो भयो।
एकदिन राजु सीतालाई छोडेर बेपत्ता भए। उनी एक्लै भइन। कलकत्तासम्म पुग्‍ने बाटो खर्च पनि उनीसँग भएन। 'म पशुपतिमा बसेर रोइरहें, मन्दिर वरिपरी घुम्थें तर राजु आएन, एकदिन बेलुकी पख म गौशाला नजिकै बसिरहेकी थिएँ। केही केटीहरु पुरुषसँग कुरा गरेपछि मोटरमा चढेको देखें', सीता भन्छिन्, 'अनि मलाई थाहा भो। यी केटीहरु पैसा यसरी कमाउँदा रहेछन्।
अनि वाध्याताले सीतालाई यही बाटोमा डोहोर्‍यायो। एकदिन पशुपति नजिकै सडकमा बसिरहेका बेला उनलाई एक भारतीयले जाउँ भनेपछि उनी तयार भइन्। त्यस दिनदेखि सीता देहव्यापारमा संग्लग्‍न छिन्। 'म बाध्यताले यस्तो काममा लागेकी हुँ, पैसा सकिएपछि धेरै ठाउँमा गएर काम मागेँ तर काम पाइनँ', उनी थप्छिन्, 'यो काममा लागेपछि पैसा आयो, केही पैसा जम्मासमेत गरेकी छु।'
यहाँ यौन व्यापार गर्ने यौनकर्मीले पशुपति क्षेत्रलाई भारतको मुम्बईस्थित चर्चित रेडलाइट एरिया 'कमाठीपुरा' सँग जोड्ने गरेका छन्। काठमाडौंस्थित भारतीय यौनकर्मीका लागि चर्चित ठाउँ बनेको छ पशुपति क्षेत्र। 'पशुपति जस्तो धार्मिक क्षेत्रमा यौन व्यवसाय चलिरहेको छ भन्ने त थाहा नै थियो तर यति खतरनाक रुपमा मौलाइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थिएन', माइती नेपालकी कानुन अधिकृत उमा तामाङ भन्छिन्।
उद्धार गरिएका महिलाले ग्राहक खोज्‍न पशुपति क्षेत्र सजिलो हुने भएकाले यही क्षेत्रलाई आफ्नो व्यवसायिक अखडा बनाउँदै आएको बताउँछन्। वर्ष २५ की रिताकुमारीले श्रीमानको मानसिक सन्तुलन गुमेपछि सन्तान हुर्काउन र दैनिक गुजारा चलाउन आफू यो पेसामा लागेको बताइन्। उनले भनिन्, 'तीन वर्षदेखि मैले पशुपति क्षेत्रमा यो धन्दा गर्दै आएकी छु।' उनले देहव्यापार गरेर छोरालाई पढाएको बताइन्।
पानीपुरीबाट गुजारा नचलेपछि देह व्यापारमा संग्लग्‍न भएकी देवी यादव (४५) पशुपति क्षेत्रमा यो धन्दा गर्नका लागि पछिल्लो समय नयाँ केटीहरु आएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'हामी पुराना पनि छौं तर अहिले धेरै नयाँ केटी आएका छन्। उनीहरु आफ्नै तरिकाले हिड्छन्, हामी आफ्नै तरिकाले हिँड्छौ‌‌।'
ग्राहक खोजीदिने काममा पनि केही प्रौढ महिला सक्रिय छन्। 'उनीहरु आफै ग्राहकसँग जाँदैनन् तर ग्राहक खोजेर ल्याइदिन्छन्। हामी उनीहरुलाई केही कमिशन दिन्छौं, रिता भन्‍छिन्। पशुपति क्षेत्रमा यौन व्यवसाय चलाउनेले नै प्रत्येक महिना आफूहरुको रगत परीक्षण गर्ने गरेको उद्दार भएका महिलाहरु बताउँछन्।
पशुपति क्षेत्रमा चलिरहेको देह व्यापारका ग्राहकमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय दर्शनार्थी हुने गरेको तथ्यसमेत खुलेको छ। यस कामका लागि यहाँका होटल प्रयोग हुने गरेका छन्। होटेलमा दलाल जाने गरेको र त्यहाँ रकम निश्‍चित भएपछि यौनकर्मी पठाउने गरिएको उद्धार गरिएका महिला बताउँछन्। कतिपय केटीले ग्राहकसँग डिल गर्दा होटेलको व्यवस्थासमेत आफै गर्ने भनेर बढी रकम लिने गरेका छन्। (व्यक्तिगत गोपनीयतालाई ख्याल गर्दै समाचारमा प्रयोग भएका महिलाका नाम परिवर्तन गरिएको छ ।
श्रीमतीलाई पटक–पटक यौन हिंसा गर्ने परपुरुषबाट बचाउँदै न्याय दिलाउन एक श्रीमान् संर्घषरत छन् । न्याय माग गर्दा श्रीमान् श्रीमती दुबै ज्यानमार्ने हदसम्मका धम्की र दबाब सहिरहेका छन् ।
यो खबर मोतीराम तिमल्सिनाले नेपाल समाचारपत्रमा लेखेका छन् ।समाजमा यस्ता श्रीमान् पनि छन् जो श्रीमतीलाई परपुरुषले यौनदासी बनाउँदा न्यायका लागि लडिरहेका छन् । भन्छन्, श्रीमतीको खुशिका लागि जे गर्न पनि तयार छु ।
पीडितका श्रीमान्ले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी गराएअनुसार, ‘जतिखेर मेरी श्रीमतीले रुँदै सबै पीडा पोखिन्, मैले सबै रिस र कुण्ठा दबाएर यादवलाई भने, जे भयो भयो अब त्यसो नगर्नुस्, मेरो घर परिवार सबै विग्रन्छ’–श्रीमान्ले भने–‘उल्टै धम्की दिदै श्रीमती छाड्न र मलाई फसाउन प्रपन्च रच्यो ।’
श्रीमान्ले भने– ‘कतिसम्म भने भाटभटेनी सुपरमार्केटमा काम गर्ने एक महिलालाई हुँदै नभएको घटना बनाएर बानेश्वर प्रहरी चौकीमा जर्बजस्ती करणीको उजुरी गराए । महिला आफैले प्रहरीका सई रामविनोद रायले फसाउने नियतका साथ उजुरी गर्न लगाएको बताएपछि उल्टै प्रहरीले हप्काएर पठायो । त्यसको कागज अझै सुरक्षित छ ।’
शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता समेत कब्जामा लिएको छ, मुद्दा फिर्ता नलिंदासम्म नदिने बताएको छ । श्रीमानलाई त्यागे जनकपुरमा तीन तल्ले घर किनेर पार्लर समेत राखिदिन्छु भनेको थियो, म बरु मर्न तयार छु, श्रीमान्लाई छाड्दिनँ भनेपछि उसले श्रीमान् र मलाई अनेक ढंगबाट फसाउने प्रपन्च ग¥यो । विवाहपछि कोठाबाटै उठाएर दुई रात तीन दिन बेहोस बनाएर जर्बजस्ती ग¥यो, मलाई सडकमा छाडेर प्लेन चढेर जनकपुर पुगेर फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरेर साँचिलो बन्यो, यता मेरो श्रीमान् मलाई खोजेको खोज्यै हुनु भयो । सबै कुरा भनेपछि प्रहरीकोमा उजुरी दिन पुग्यौं ।
६ दिदी बहिनीमध्ये ५ जना छौं । दुईवटा भाई छन् । माईली दिदीको सई रामविनोद राय यादवको कान्छो भाई अमोद यादवसँग गौरमा विवाह भएको थियो । ७÷८ वर्षअघि घरभित्रै जलाएर उसैले मा¥यो । पेटमा बच्चा थियो । दाइजो नल्याएको निहुँमा उसैले घरभित्रै आगो लगाएर जलायो । उपचार गर्न ल्याउने भन्दै काठमाडौको पशुपतिमा जलायो । कसैलाई उजुरी गर्न दिएन । पुनः दबाबमा मेरो साईली दिदीको उसैसँग विवाह गरिदियो ।
नाताले भिनाजु पर्ने सई यादवले मलाई पनि त्यसै गर्छु भनेर धम्क्याउँछ । तेरो दिदी मारेको कसैले केही गर्न सकेन, तँ र तेरो लोग्ने दुबैलाई मारिदिन्छु भन्छ ।
बाईक चोरीमा समेत श्रीमानलाई फसाउन खोज्यो । तर सकेन । प्रहरी सुुरेन्द्र ठाकुरलाई सई यादवले यस्तै काममा प्रयोग गर्ने गरेको छ । बाबु आमा नभएकाले मामाहरुको सहारामा बस्दासमेत उसले मुख नै देखाउन नहुने गरी बदनाम गरायो । महिला भएर बाँच्न कठिन छ । तर श्रीमान् बुझ्ने हुँदा मलाई समस्या छैन । समस्या त्यही छ, यसको दबाब र अन्याय कति सहनु ?
तर, प्रहरीले पनि साथ दिनुभएको छ । उहाँहरुकै सहयोगले न्याय पाउँछु कि भन्ने आस जागेको छ ।